❤️ Liliphi elona xesha lilungileyo lokuthumela kwi-Instagram ? - Facebook
Leliphi elona xesha lilungileyo lokuthumela kwi-Instagram ?
Ukuba uzama ukwandisa amanqanaba akho okuzibandakanya kwaye wandise abathengi bakho, izithuba zakho kufuneka ukutsala ubuninzi ingqalelo ixesha ngalinye. Zininzi izinto onokuzenza ukwandisa ukubandakanyeka kwakho., Kwaye kwaxoxwa ngazo ngokweenkcukacha kwicandelo lethu lebhlog:
Zijolise kubo ii-hashtag ethandwayo
Bhala i-bio I-Instagram ephawulekayo
Yenza ifayile ubuhle ukugqama
Ukuba uyazenza zonke ezi zinto kwaye uvelisa umxholo omkhulu, inye into yokugqibela onokuyenza ukuze indawo yakho iphumelele:
Yenza iposti xa wonke umntu ekwi-intanethi.
Oku akuyi kuvumela kuphela abantu abaninzi ukuba babone iposti yakho., kodwa kwakhona ukwandisa amandla ayo okusetyenziswa kunye nokwabelana. Kufuneka sithathele ingqalelo izinto ezithile ngexesha lomsebenzi. Ke masiqale ngokufumana elona xesha lilungileyo lokupapasha iposti yakho kwi-Instagram..
Ngaba likho ixesha elifanelekileyo lokwenza iposti kwi-Instagram ?
Kufuphi, Kubonakala ngathi kukho iintsuku ezithile kunye namaxesha apho uluntu lwe-Instagram luphela lusebenza kakhulu. Jonga le grafu ebonisa amanqanaba e-Instagram ngokubanzi okuzibandakanya kwi-CST : (I-CST isemva kwe-GMT iiyure ezi-5)
Le tafile ibonisa ukuba ezona ntsuku zibalaseleyo zokuthumela kwi-Instagram zezi:
Kwaye siyabona ukuba elona xesha lilungileyo lokuthumela kwi-Instagram yile:
NgoLwesithathu nge-11 ekuseni
NgoLwesithathu 1 p.m.
NgoLwesihlanu ngentsimbi yesi-9 kusasa.
NgoLwesihlanu nge-10 ekuseni.
Siyabona kwakhona ukuba iintsuku ezimbi kakhulu zokuthumela:
Kwaye elona xesha libi lokuthumela lililo:
Yonke imihla ukusuka kwintsimbi yeshumi ukuya kweyesine kusasa.
Oku kukodwa kusinika indawo efanelekileyo yokuqala isithuba ngexesha elifanelekileyo lokufumana olona hlaselo lunokwenzeka..
Kuthekani Ngeendawo Zamaxesha ?
Imimandla yexesha yinto emisela ekukhetheni elona xesha lilungileyo lokuthumela kwimidiya yoluntu. Ukuba uninzi lwabaphulaphuli bakho luphesheya, Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukulungelelanisa isicwangciso-qhinga sakho sokuthumela ukuze uhlangane neeshedyuli zokuqesha aba bantu.
Oku kuthetha ukuba ukuba use-UK kwaye baninzi abantu eMelika nase Canada abanomdla kumxholo wakho, kufuneka usebenzise itshati engentla kwaye wongeze iiyure ezi-5 kumaxesha afanelekileyo.
Umzekelo, ukuba use-UK kwaye baninzi abantu eMelika naseKhanada abanomdla kumxholo wakho, kufuneka usebenzise igrafu engentla kwaye wongeze iiyure ezi-5 kumaxesha afanelekileyo :
Ukuba ufuna ukuchitha ixesha langoLwesithathu nge-11 kusasa eChicago, Kufuneka uthumele apha e-UK ngo-4pm.
Ukuba ufuna ukuchukumisa yomibini imida yexesha ngaxeshanye, cinga ukwahlula umahluko kwaye ubambe i-spikes yamva nje yokuzibandakanya e-UK ngokuthumela ngo-2pm, ukuze ube usazibophelela kakuhle eUnited States ukusuka ngo-9 ekuseni..
Kukho izixhobo ezikunceda ukuba wenze iishifti ngamaxesha athile ngokungqinelana nokucwangcisa iishifti.
Kwindlu ka IBF, sidibanise iqonga lethu ngumdwelisi wenkqubo ogqwesileyo ekuvumela ukuba usete inkqubo yezikhululo ngaphandle kokukhathazeka ngayo.
Fumanisa xa abaphulaphuli bakho besebenza kakhulu besebenzisa ulwazi lwe-Instagram
Ukuba uneakhawunti yeshishini nge-Instagram, I-Instagram yenza kube lula ukujonga ezakho iindlela zokuzibandakanya kunye ne-Instagram Insights. I-Instagram Insights ikunika idatha eyenzelwe wena yeakhawunti yakho, kulula ukuyiqonda nekulula ukufikelela kuyo:
Ukufikelela kwiphepha leakhawunti yakho ngokucinezela i icon ezantsi ngasekunene komfanekiso weprofayile yakho
Cinezela kwimenyu “ibhamburger” ngasentla ekunene
Chukumisa Inketho yokuqonda ngetshathi yebar ecaleni kwayo
Ungatshintsha ukusuka kumxholo wamanani ukuya kwidatha yomsebenzi kunye neemethriki zabaphulaphuli.
Enkosi kule mizobo, unokufumana ulwazi oluthe kratya malunga nokuba ababandakanyeki bakho babandakanyeka njani, nokuba nini kwaye kuphi.
Singayibona le akhawunti, NgoMvulo nangoLwesithathu zezona ntsuku zibalaseleyo zokukhula kweprofayili, ehambelana netafile yethu yokuzibophelela iyonke. Singabona kwakhona ezona ndawo zibalaseleyo, lulwazi olukhulu ukwazi xa ujonga ixesha kunye nexesha lokupapashwa.
Ngolu lwazi, Kuya kufuneka ubenakho ukufumanisa eyona ndawo uyiyeke kuyo umboniso ukuze ufezekise elona nqanaba liphezulu lokuzibandakanya.
Sinokubona izinto ezinjengokwaphuka kwesini, kunye namaxesha apho abalandeli bale akhawunti basebenza kakhulu.
Qala ukonyusa iZithuba zakho ze-Instagram
Ukuba ufuna ngenene ukukhulisa iakhawunti yakho kwaye ufumane awona manqanaba aphezulu okuzibandakanya, Kuya kufuneka usebenzise ezi nkqubo ukuba zikuncede. Kukho nezinye izicelo zomntu wesithathu ezivumela abasebenzisi be-Instagram ukuba babone olunye ulwazi malunga neakhawunti yabo ngendlela eluncedo ekukhuleni kweakhawunti yabo..
Ukubeka iliso kwezentlalo inikeza ulwazi olulula, olunzulu ukuze ukwazi ukuqonda abaphulaphuli bakho kwaye ulandele inkqubela phambili yeakhawunti yakho. Ngoku benza isilingo sasimahla, bhalisa kwaye uqalise ngoku. Ungayidibanisa neyethu Isoftware esebenzayo kunye neshedyuli yopapasho ngexesha elifanelekileyo lokufumana ukubandakanyeka okuphezulu kwiakhawunti yakho.
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaI-Instagram ayivumi ukuba ndingene : Facebook
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaIndlela yokongeza ibali kwi-Instagram